Abenzi baseCrimped Wire mesh kunye nabathengisi | UDa Shang
Xa indawo evulekileyo ibalulekile, ii-crimps ezongezelelweyo phakathi kweendlela zinika ukuluka okungqongqo ngakumbi kwaye zibonelela ngokutshixa kunye nokuqina kweengcingo ezikhanyayo ngokunxulumene nokuvuleka okukhulu.
Ngenxa yenkqubo yokuncwina, umnatha uneendawo ezivulekileyo ezichanekileyo kwaye zilukiwe emva kokubethwa. Kukhethwa ngokukhethekileyo kwiscreen sokungcangcazela kunye nezinye izinto ezininzi apho ubukhulu becala bubalulekile. Ingasetyenziselwa iifestile, izahlulelo, ukugcadisa inyama kunye nomgubo wokucheba kunye nezikrini zam.
Uhlobo oluqhelekileyo lweCrimp-Olona hlobo luqhelekileyo. Isetyenziswe apho kuvulwa khona kuncinci xa kuthelekiswa nobubanzi becingo.
* Ukutshixiza okutshixiweyo-Kusetyenziswa kuphela kwimixokelelwane erhabaxa yokugcina ukuchaneka kokuluka kubomi bekrini, apho ukuvulwa kukhulu ngokubhekisele kububanzi becingo .;
* Ukucofa okuthe tyaba-Ngokwesiqhelo kuqala nge-5/8 ″ (15.875 mm) yokuvula kunye enkulu. Inika ubomi obude obunganyangekiyo, kuba akukho luqikelelo ngaphezulu lokunxiba. Inika ukumelana okuncinci ukuhamba. Ikwayaziwa kakhulu kusetyenziso oluthile loyilo kunye nolwakhiwo apho indawo egudileyo kwelinye icala iyanqweneleka .;
* I-Inter Crimp-Isetyenzisiwe kwimixokelelwane erhabaxa yocingo lokukhanyisa ukubonelela ngozinzo olukhulu, ukuqina kokuluka kunye nokuqina okuphezulu. Kuqheleke kakhulu ekuvulekeni kwe-mesh okukhulu kune-1/2 ″ (12.7 mm).
Heavy umsebenzi crimped ucingo umnatha iimveliso ubukhulu becala kusetyenziswa njengezikrini kwezimbiwa, mveliso amalahle, ulwakhiwo okanye amanye amashishini.
Uhlobo lokukhanya umnatha wocingo unokusetyenziselwa ukugcoba, imilo ingangqukuva, isikwere, ijika, njalo njalo. Isetyenziselwa ukugcoba ukutya okanye inyama, ukuxhathisa ubushushu, ukumelana nokubola, ukungabi netyhefu, ukungabi nasongo kunye nokulungele ukuphatha.
Iimpawu Crimped wocingo
Ukumelana lingonakali eliphezulu
-Ukusikwa ngokulula ukuze ulingane
Iimathiriyeli Crimped wocingo
-Intsimbi ephezulu yeCarbon
-Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Okulandelayo: Stainless welding wocingo